Zvinosungirwa wemushandirwi nemushandi zvinoenderana neWork Conditions Act | Law & More BV
Blog » Zvinotarisirwa nemushandirwi nemushandi zvinoenderana neMutemo Wekushanda
Chero basa raunoita, iro musimboti muNetherlands nderekuti munhu wese anofanirwa kushanda zvakachengeteka uye zvine hutano. Chiono chinosimudzira chirevo ichi ndechekuti basa harifanire kutungamira kurwara panyama kana nepfungwa uye kwete zvachose kurufu semhedzisiro. Iyi nheyo inosimbiswa mukuita neiyo Working Conditions Act. Chiito ichi chakanangana nekusimudzira mamiriro ekushanda akanaka uye kudzivirira kurwara uye kutadza kushanda kwevashandi. Iwe uri mushandirwi here? Muchiitiko ichocho, kuchengetwa kwenzvimbo ine hutano uye yakachengeteka yekushanda zvinoenderana neMutemo Wemamiriro Ekushanda iri mumusoro newe. Mukati mekambani yako, kwete chete panofanirwa kuve neruzivo rwakakwana rwehutano hwakanaka uye hwakachengeteka kushanda, asi iwo marongero eiyo Working Conditions Act inofanirawo kutevedzwa kuitira kudzivirira njodzi isingakoshe kune vashandi. Iwe uri mushandi here? Muchiitiko ichocho, zvinhu zvishoma zvinotarisirwawo kwauri mumamiriro enzvimbo yekushanda ine hutano uye yakachengeteka.
Sekureva kwe Working Working Act, mushandirwi anozopedzisira ave nemamiriro ekushanda pamwe chete nemushandi wake. Semushandi, iwe unofanirwa nekudaro unobatsira mukugadzirwa kwenzvimbo yebasa ine hutano uye yakachengeteka. Kunyanya zvakanyanya, semushandi, nekuda kweMutemo Wekushanda Mamiriro, unosungirwa:
kushandisa zvishandiso zvebasa nemazvo zvinhu zvine ngozi nemazvo;
kusachinja uye / kana kubvisa zvinodzivirirwa pamidziyo yebasa;
kushandisa michina yekuzvidzivirira / aids inowanikwa nemushandirwi nemazvo uye kuzvichengeta munzvimbo yakakodzera;
kushandira pamwe mune zvakarongeka ruzivo uye kurairirwa;
kuzivisa mushandirwi nezve njodzi dzinoonekwa kuhutano nekuchengeteka mukambani;
kubatsira waunoshandira uye nedzimwe nyanzvi (dzakadai sedziviriro), kana zvichidikanwa, mukuita zvavanosungirwa.
Muchidimbu, unofanirwa kuzvibata zvine mutsigo semushandi. Iwe unoita izvi nekushandisa mamiriro ekushanda nenzira yakachengeteka uye nekuita rako basa nenzira yakachengeteka kuitira kuti urege kuzviisa mungozi iwe nevamwe.
Kuti ugone kupa hutano uye yakachengeteka nzvimbo yekushanda, iwe semushandirwi unofanirwa kuteedzera mutemo wakanangana nemamiriro akanakisa ekushanda. The Working Conditions Act inopa gwara remutemo uyu nemamiriro ekushanda anoenderana nazvo. Semuenzaniso, mutemo unoshanda mamiriro anofanira mune chero mamiriro ezvinhu kuve ne kuongorora njodzi uye kuongorora (RI&E). Semushandirwi, unofanirwa kutaura nekunyora kuti njodzi dzinosanganisirei vashandi vako, kuti njodzi idzi kuhutano nekuchengeteka dzinogadziriswa sei mukati mekambani yako uye kuti ndedzipi njodzi senzira yetsaona dzebasa dzakatoitika. A wekudzivirira inokubatsira iwe kugadzira hesiti yenjodzi uye kuongorora uye inopa kuraira pane yakanaka hutano uye chengetedzo mutemo. Kambani yega yega inofanirwa kugadza angangoita akadaro wekudzivirira. Uyu haafanire kuve mumwe munhu anobva kunze kwekambani. Iwe unoshandisa 25 kana vashoma vashandi? Ipapo iwe unogona kuita semudziviriri officer iwe pachako.
Imwe yenjodzi iyo chero kambani inoshandira vashandi inogona kutarisana nayo ndeyekusaenda kubasa. Zvinoenderana neChinyorwa Chekushanda Mutemo, iwe semushandirwi unofanirwa kuve ne mutemo wekusavapo kwechirwere. Iwe unoita sei semushandirwi kubata nekusaenda kubasa kana zvikaitika mukati mekambani yako? Iwe unofanirwa kunyora mhinduro kumubvunzo uyu nenzira yakajeka, yakakwana. Nekudaro, kuitira kuti udzikise mukana wenjodzi yakadai kuzadzikiswa, zvinokurudzirwa kuve ne nguva nenguva yekuongorora hutano (PAGO) inoitwa mukati mekambani yako. Munguva yekuongorora kwakadai, chiremba wekambani anoita rondedzero yekuti unosangana nematambudziko ehutano nekuda kwebasa. Kutora chikamu mukutsvagisa kwakadai hakusi kwekumanikidza kumushandi wako, asi zvinogona kubatsira zvakanyanya uye kunopa kune denderedzwa rine hutano uye rakakosha revashandi.
Uye zvakare, kudzivirira dzimwe njodzi dzisingatarisirwi, unofanirwa kuseta iyo in-house emergency emergency team (BHV). Kambani yekukurumidzira mhinduro mhinduro inodzidziswa kuunza vashandi nevatengi kuchengetedzeka mune emergency uye nekudaro ichabatsira mukuchengetedza kwekambani yako. Unogona kuzvisarudzira wega uye vangani vanhu vaunogadza seanopindura emergency emergency. Izvi zvinoshandawo nenzira iyo iyo kambani emergency emergency ichaitika. Nekudaro, iwe unofanirwa kutora saizi yekambani yako muakaunzi.
Kuongorora uye kutevedzera
Kunyangwe paine mitemo nemirau inoshanda, tsaona dzebasa dzichiri kuitika gore rega rega muNetherlands izvo zvingadai zvakadzivirirwa nemushandirwi kana mushandi. Kungovapo kweiyo Working Conditions Act hakuwanzoite sekukwana kuverengera musimboti wekuti munhu wese anofanirwa kushanda zvakachengeteka uye zvine hutano. Ndokusaka Inspectorate SZW ichiongorora kuti vashandirwi here, asiwo kuti vashandi vanoteerera here kumitemo yebasa rine hutano, rakachengeteka uye rakaringana. Zvinoenderana neWorking Conditions Act, iyo Inspectorate inogona kutanga kuferefeta kana tsaona yaitika kana kanzuru yevashandi kana vevashandi vachikumbira. Uye zvakare, iyo Inspectorate ine masimba anosvika kure uye kubatana mukuferefeta uku kunosungirwa. Kana iyo Inspectorate ikaona kutyorwa kweiyo Working Conditions Act, kumiswa kwebasa kunogona kukonzera faindi hombe kana mhosva / mhosva yezvehupfumi. Kuti udzivise matanho anosvika kure, zvinokurudzirwa iwe semushandirwi, asi zvakare semushandi, kutevedzera zvese zvisungo zveWork Conditions Act.
Iwe une chero mibvunzo nezve iyi blog? Wobva wabata Law & More. Magweta edu nyanzvi mumutemo wezvemabasa uye vanofara kukupa rairo.
Previous Post Kugadziriswa kwekumanikidza: Kubvumirana kana kusabvumirana?
Next Post Kurega